ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်ခ် အိုဘားမားနဲ့ မြန်မာ ရုပ်သေးသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ)
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်ခ် အိုဘားမားနဲ့ မြန်မာ ရုပ်သေးသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:51 AM
နိုင်ငံတော် အဆင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်သိထားပြီးဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေယူလေသိမ်း ပြောနည်းပြောဟန်ဟာ အင်မတန်ညံ့ဖျင်းလွန်းပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတွက် ဘယ်လိုဂုဏ်ပြယုတ်တခုမှ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ အင်မတန် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အပြောအဆို အရေးအသားကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာသမားများ အများအပြားရှိပါတယ်။ လူစားထိုး သုံးဖို့ အချိန်တန်ပါပြီလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
I think they purposely do this. Even they could not speak well but they can show their power.
DASSK can communicate very well but she has no power yet.
I do not trust and believe.